WaterProof ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny ranom-bolamena
Ny MH WaterProof Ny kofehy fitaratra dia manana endri-drano miavaka manokana
Ny kofehy manjaitra amin'ny MH tsy manana filaharam-be dia manana endri-panafody miavaka izay manakana ny kapitaliny, ary manome antoka fa tsy misy rano noraisin'ny kofehy. Rehefa ampiasaina ny fihenjanana manjaitra dia avoakan'ny fitaterana rano amin'ny alàlan'ny lavaka fanjaitra.
Ny kofehy fanjaitra môteran'ny MH dia manana hery manimba ny fahalotoana ary mitandro ny fahadiovana maharitra; ny fanamafisana ny fanamafisana ny andro amam-pahamarinana ary ny valim-paharetana maharitra, ny fanoherana UV, ny fanoherana ny oksidana; Fanamafisana ny tifitra sy ny ranomaso, ny toetra manala baraka; piadiana.
Spec: Ny habe mahazatra dia 20/2, 30/3, 40/3
Color: miaraka amin'ny loko 800, dia afaka mifanaraka tsara amin'ny lamba nanjaitra.
Product Features: Fampisehoana tantera-drano avo lenta, Volomparasy malefaka, Tanjona sy fijery tena tsara, famokarana avo lenta, halavan'ny loko maro, fanoherana simika avo
Applications: Azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fiompiana, fiara, sambo, orinasa, harena an-kibon'ny tany, fiarandalamby, fiarandalamby, orinasa, fikojakojana fambolena, sns.
30/3 Tapaka fanjaitra rano 3000y
30s / 2 Fitaovana fanjaitra rano
20S / 2 Fandriana fanadiovana rano